बच्चा लगिदियो भन्दै रुदै लाइभ आइन् आमा, वीर अस्पतालका बिरामीलाई भुस्याहा कुकुरले टोक्छन् ! (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
बच्चा लगिदियो भन्दै रुदै लाइभ आइन् आमा, वीर अस्पतालका बिरामीलाई भुस्याहा कुकुरले टोक्छन् ! (भिडियो)
काठमाडौं, २३ असोज । न्युज २४ टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘सीधाकुरा जनतासँग’को आज २८६ औं एपिसोड हो । आजको यस विशेष एपिसोडमा विभिन्न रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएका छन्, जहाँ ‘दलित परिवारका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य चौकी प्रवेशमा रोक’, ‘वीर अस्पताल भित्रै भुस्याहा कुकुरको आतंक’ लगाएका रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।
आजको यस विशेष एपिसोडमा निम्न रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छः
१. नवलपरासीमा दलित परिवारका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य चौकी प्रवेशमा रोक !
नवलपरासी, २३ असोज । छुवाछुतविरुद्ध जति कडा कानुन बने पनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो हुँदा समाजमा अहिले पनि फरक फरक ढङगबाट छुवाछुत भइरहेकै छ । नवलपरासीको पालिनन्द गाँउपालिकाका डुम समुदायले भोगेको छुवाछुतको पीडाले फेरी एक पटक सरकारी निकाय देखि सार्वजनिक स्थानमा हुने छुवाछुतको पराकाष्ट बाहिर आएको छ ।
यो पालिनन्द गाँउपालिका ४ मा रहेको पाल्ली सामुदायीक प्राथमिक स्वास्थय चौकी । मानिस जिवन बचाउन खोलिएका स्वास्थ्य चौकीमा पनि छुवाछुत हुन्छ ।
२. वीर अस्पताल भित्रै भुस्याहा कुकुरको आतंक
काठमाडौं, २३ असोज । वीर अस्पतालको भित्र रहेको बिरामी वार्डमा उपचार गराइरहेका बिरामीलाई भुस्याहा कुकुरले टोक्यो भन्दा अच्चम लाग्न सक्छ । तर बुढालिकण्ठकी मेनुका बानीयाँलाई भने आइतबार बिहानै वीर अस्पतालको महिला वार्डमा २ वटा भुस्याहा कुकुरले टोके ।
आफन्त कुरुवा बसेकी उनि औषधि लिएर वार्ड छेउमै पुग्दा कुकुरले झम्टीए । मेनुका मात्र होइन त्यस वार्डमा रहेका अन्य बिरामी र उनका कुरुवाहरुसमेत भुस्याहा कुकुरबाट त्रसित छन् ।
३. बागलुङ नगरपालिकामा कार्यालयमा कर्मचारीदेखि मेयर कोही भेटिदैनन्
बागलुङ, २३ असोज । बागलुङ नगरपालिका स्थित कुँडुले कालिमाटी सडक स्तरउन्नतीको काम उपभोक्ता समिति मार्फत सम्पन्न भएको ३ महिना बढी भयो ।
दिनरात नभनी सम्झौता भएको एक महिनामै काम सम्पन्न गरेको उपभोक्ता समिति अहिले आयोजनाको रकम भुक्तानी लिन नगरपालिका धाँउदा धाँउदा हैरान भएका छन् ।